Blockchain News 8 EyoMqungu 2018 - Blockchain News
Ron Paul Yokubhalisa Bitcoin
Owayesakuba States Republican Ron UPawulos uthi zonke bitcoin njengendlela lwemali, logama nje yonke into elawula, asethi virtual kusemthethweni.
Owayesakuba Republican States evela eTexas kutshanje wamkhumbuza CNN xa Congress, waqalisa umthetho ukuvumela iimali ezikhuphisanayo kuba ayithiyileyo inkqubo yangoku.
", Lisikizi kum inkqubo esinalo. Ezi abaqashi esemthethweni kwi Reserve Federal. Eso misstep enkulu kunye ingxaki enkulu. Ngoko ke abantu kufuneka babe nelungelo lokukhetha,"I Newsmax Insider uthi.
"Benza ekuqaleni xa imali waqalisa. Amfunqula igolide nesilivere. Kwaye urhulumente sele kusetyenziswa afeketha ukuba standard yaye yayiphethwe ngayo. Yaza yayitshabalalisa kweli lizwe,"Wathi ke uPawulos.
"Ndifuna ngokusemthethweni bonke abo iinketho kwaye yintoni abantu bafuna ukusebenzisa njengemali. Kodwa akukho ubuqhetseba. Awukwazi ubuqhophololo,"I Texas Libertarian waxelela CNN kaThixo Michael Smerconish.
Ron UPawulos gqirha, umbhali, kwaye zangaphambili States Republican. UPawulos lixesha-ezimbini Republican umgqatswa lukamongameli, kunye umtyunjwa kamongameli le Libertarian Party kwi 1988 U.S. ngokhetho.
ViaBTC lokuvala yemarike yayo zeekhontrakthi zemigodi
Chinese pool bitcoin imigodi ViaBTC ubhengeze ukuba iya kuvalwa yentengiso yayo zeekhontrakthi zemigodi kule veki, intshukumo enokuthi kuza phakathi iingxelo ezintsha ukuvalwa ngabasemagunyeni kweli lizwe.
In a Jan. 8 mazwi, ViaBTC wathi angavala phantsi imarike - apho abasebenzisi ezingathenga izivumelwano ilungelo ukuba kukho imali ethile amandla hashing (kunye Ukubhatalwa cryptocurrency ezinxulumene) - is uJan. 10. Isizathu: inkampani efuna ukwenza “ukulawula ukuqashisela kunye nokukhusela umdla abatyali-mali yethu.”
“Nceda uwagqiba yorhwebo contract yakho imigodi ilifu ASAP. Enkosi nonke ngenkxaso yenu,” ViaBTC wongezelela.
ViaBTC okokuqala inkonzo zezimbiwa ilifu ngoNovemba 2016.
Masixole iza iinyanga emva ViaBTC cima cryptocurrency kwananwe ngayo ukuphendula wokulwa ngabasemagunyeni Chinese kwi ecosystem irandi lizwe, wenqubo eyaqala nje emva ekuqaleni 2016. Amagosa lafudukela thintela ukusetyenziswa iminikelo kokuqala lwemali (ICOs) ku September.
Kodwa nangona kungekho nto ibonisa ngokucacileyo ukuba iziganeko ezibini uhlobene, isaziso yakutshanje kulandela iingxelo ezintsha ukuba amagosa e-China bafuna ngokucima okuthe imisebenzi yemigodi bitcoin yasekhaya.
Ngokutsho amaxwebhu kusasazwa phezu veki kwaye kunganxulunyaniswa Ukukhokela Group of Internet Financial Engozini eyodwa, komlawuli Chinese, amagosa ufuna yokunqanda inkxaso mgodi bendawo, imema amanyathelo malunga namandla kunye nomhlaba nokusetyenziswa. Omnye amaxwebhu bacela ukuba amagosa ukulungiselela izicwangciso ukuba inkqubo enjalo ngomhla we-10.
Ummeli ovela ofisi Xinjiang-Arhente baqinisekisa ukuchana amaxwebhu ukuba zwi kodwa wanqaba ukuba siphawule.
Njengoko kucaciswa ngokubhekele Bloomberg, mgodini e China zitshintshela impembelelo yabo kude lizwe, loya iindawo ezintsha eYurophu nakuMntla Melika. Inkonzo ndaba ingxelo ukuba amagosa e-China ufuna wokubeka i “ehlelekile” zivalwe ze-ikhosistim kwemigodi.
Ingalo fintech ka G ...
Post Previous:About ICO: Ngubani baqokelela imali ezininzi ngexesha yokuthengisa ithokheni
Post Next:amacebo yocingo ICO